2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (ဓာတု abstraction န်ဆောင်မှုများ) Registry ကိုနံပါတ် 22536-61-4
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိပညာ > 2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (ဓာတု abstraction န်ဆောင်မှုများ) Registry ကိုနံပါတ် 22536-61-4
08 / 18 / 2018Posted by: APICMOအမျိုးအစား: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိပညာ0 အကြိုက်များ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတု Properties ကို၏ 2-Chloro-5-methylpyrimidine
2- Chloro-5 methylpyrimidine အခန်းအပူချိန်မှာအလင်းအဝါရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်အသွင်အပြင်ရှိပါတယ်။ တချို့က Off-အဖြူအဖြစ်အရောင်အရိပ်ကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမကြိုင်နှင့်မှဲ့နှုန်း 128.56 ဂရမ်တစ်ဦးမော်လီကျူးအလေးချိန်ရှိပါတယ်။ CC5 = CN = ကို C (CL) N ကို = C5 အဖြစ် Input ကိုလိုင်း Entry စနစ် (အပြုံး) - ယင်း၏ဓာတုပုံသေနည်း C2H1CIN1 နှင့်မျက်မှောက်ရေးရာ Molecular အဖြစ်မှတ်ချက်ပြုသည်။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းစင်တီဂရိတ် 89-92 ဒီဂရီအကြားနေကြပါတယ်တဲ့အရည်ပျော်မှတ်နှင့် 239mm / Hg မှာ2.750 ဒီဂရီကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအစိုင်အခဲကိုရေ၌အနည်းငယ်ပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အား 97% နှင့် 98% အကြားပျမ်းမျှ assay (သန့်ရှင်းစင်ကြယ်), 95% အဖြစ်မှတ်ချက်ပြုနိမ့်ဆုံးနဲ့ဆေးဝါးအလယ်အလတ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည်။ 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) ၏တစ်ခုတည်းမှဲ့များ၏သိပ်သည်းဆစင်တီဂရိတ် 1.169 ဒီဂရီမှာမှဲ့နှုန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25 ဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခိုးအငွေ့၏ Enthalpy 45.68 KJ / mol နှင့်အခိုးအငွေ့ဖိအားမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တိုင်းတာသည် 0.0626 မှာ 25 mmHg စင်တီဂရိတ်ဘွဲ့။ 2-chloro-5-methylprimidine ဘို့အတွက်အသုံးပြုဘုံ synonym တွေဟာနေသောခေါင်းစဉ်: Pyrimidine, 2-Chloro-5-methylpyrimidine, 2- chloro-5-methyl- (8Cl, 9Cl) နှင့် 5- methyl-2- chloropyrimidine ။
2-Chloro-5-methylpyrimidine ၏ပြင်ဆင်မှု (22536-61-4)
2- chloro-5 methylpyrimidine နည်းလမ်းအတော်များများသုံးပြီးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်မှုအဘို့ဘုံအလေ့အကျင့် phosphorus ကို oxychloride နှင့် 25- methylpyridine 3- အောက်ဆိုဒ်အကြားတုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်ရလဒ်များသောထုတ်ကုန်၏ 1% အဖြစ်ရရှိရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ oxide - သို့သော်တစ်ဦးကိုပင်မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းရရှိရန်, 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) 3- methylpyridine 1 နှင့်အတူ phosphorus ကို oxychloride တုံ့ပြန်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတိုးတက်မှုအခြေခံအော်ဂဲနစ်နိုက်ထရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများပစ္စုပ္ပန်နှင့်တစ်ဦး diluent (ဖြစ်နိုင်ရင်အာဂွန်အော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်း) အားလုံး -50 ဒီဂရီနှင့် + 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အကြားအပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်းဖျော်ဖြေအတူတုံ့ပြန်မှုထွက်တင်ဆောင်လာသောပါဝငျသညျ။ ပင် 70% အထိများ၏အထွက်နှုန်းကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ အသုံးပြု. ရယူနိုင်ပါသည်။ ဤအအထူးသဖြင့်မဖြစ်နိုင်အနီးအကြီးစားအပေါ်ကွပ်မျက်, အောင်ရှောင်ကွင်းဖို့အနည်းငယ်ခက်ခဲသက်သေပြအားနည်းချက်များရှိသော်လည်း 96% ကျော်၏သီအိုရီအထွက်နှုန်းကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်း၏ရှေးခယျြမှုတစျခုထုတျကုနျခွငျးအားဖွငျ့ကတခြားကနေထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ခြားနားလွယ်ကူခြင်းစလေိုကွောငျးငွေပမာဏကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့အန္တိမအသုံးပြုမှုအပေါ်မူတည်ပြီးသင်အမြဲပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထွက်ရှာ, ဒါမှမဟုတ်သင်အသုံးပြုလိုတဲ့သင့်လျော်တဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်သင်ပြင်ဆင်မှုကိုယ့်ကိုကိုယ်ထွက်တင်ဆောင်ရပါမည်။
တစ်ဦး Pyramidine အတိအကျကဘာလဲ?
ရိုးရှင်းစွာအထား, သူတို့တစ်တွေခြောက်လ membered လက်စွပ်အတွက်ကာဗွန်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်အက်တမ်တွေနဲ့မွှေးကြိုင်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလက်စွပ်မျှမျှတတတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ Pyramidine အနကျအဓိပ်ပါယျ, အချိန်ကြာမြင့်စွာယခုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သို့မဟုတ်အခြားဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူ conjuction အတွက်ဖြစ်စေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍကပါပွီ။ သူတို့ကသုံးခြင်းနှင့်အပါအဝင်ဆေးဝါးများ၏ကျယ်ပြန့်များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ဆက်လက်ပေမယ့်မန့်အသတ်, မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, ဆန့်ကျင်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါဆေးဝါး, ယေဘုယျထုံဆေး, ဆန့်ကျင်ငှက်ဖျားဆေးကုသမှုနှင့်ပင် HIV ပိုးဆေးဝါးများ၏ပေါင်းစပ်အတွက်မူးယစ်ဆေးပြီ ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစိုက် 2-chloro-5 methylpyramidine နှင့်အလယ်အလတ်အဖြစ်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုအပေါ်ဖြစ်ပါသည်
အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပလီကေးရှင်း 2- Chloro-5- methylpyramidine
ဒါဟာပုံမှန်အားအော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်များတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ လေ့ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းသတ်ဆေးအဖြစ်တီးရီးယားရောဂါပိုးအဖြစ် acetamiprid, imidacloprid အဖြစ်အလယ်အလတ်တစ်ဦးပိုးသတ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာဆေးဝါးအလယ်အလတ်, catalytic အေးဂျင့်နှင့်ရေနံဓာတုထို့အပြင်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ 2- Chloro-5- ပိုးသတ်ဆေးလှုပ်ရှားမှုရှိသည်သစ်ကို neonicotinoid ဒြပ်ပေါင်းများ၏ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့ methylpyramidine ။ imidacloprid, Acetamiprid, Nitenpyram, NTN32693: Agro ထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်အခြားအသုံးပြုမှုများ၏ချမှတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားအသီး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်သီးနှံကောက်ပဲသီးနှံများမှအန္တရာယ်ရှိသောအင်းဆက်ပိုးမွှားဖျက်ဆီးဖို့လူနေအိမ်နှင့်စက်မှုနှစ်မျိုးလုံးခြံများတွင်ထိရောက်မှုသက်သေပြခဲ့ကြသည်။
2-Chloro-5 methylpyramidine စေရန်သုံးနိုငျသောအခြားဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကိုပါဝင်သည်:
အခန်းအပူချိန်မှာ: 2-Chloro-5 methylpyramidine အကြံပြုအခြေအနေများအောက်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်အခါဓာတုဗေဒတည်ငြိမ်ဖြစ်လူသိများသည်။ ဝင်းနောက်ဆုံးမှာလေနှင့်အတူတစ်ဦးပေါက်ကွဲအရောအနှောကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုထုတ်လုပ်ဤအတူတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, လူမီနီယမ်သို့မဟုတ်သွပ်ရည်စိမ်ကွန်တိန်နာသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့။ သငျသညျ detect စောစောမဆိုယိုဖိတ်သို့မဟုတ်ပေါက်ကြားလေ့ပုံမှန်ကွန်တိန်နာစစ်ဆေးသေချာအောင်လုပ်ပါ။
၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်မဟုတ်တဲ့အန္တရာယ်ရှိသောသဘောသဘာဝရန်, 2- chloro-5- methylpyramidine ဝေဟင်သို့မဟုတ်ပင်လယ်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ပို့ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤဒြပ်ပေါင်းများကိုမဆိုရန်မထိတွေ့နှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုရွေးဖို့အကြံပေးသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်, ကာဗွန်အောက်ဆိုဒ်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အတူမြင့်မားတုံ့ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်တိန်နာတစ်ဦးအေးမြခြောက်သွေ့ကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်အရပ်ဌာန၌, တင်းတင်းကျပ်ကျပ်တံခါးပိတ်ထားသင့်ပါတယ်
သငျ့လျြောသောကိုင်တွယ်မှု, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကွိုတငျကာကှယျမှုမြား, ရှင်းများနှင့်မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ချက်များ
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းထိုကဲ့သို့သောဓာတုခံနိုင်ရည်လက်အိတ်များနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးအဖြစ်အကာအကွယ်ဂီယာဝတ်ဆင် 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) ကိုမျက်စိသို့မဟုတ်အသားအရေနှင့်အတူမည်သည့်အဆက်အသွယ်မှရှောင်ရှားရန်။ ယင်းအခိုးအငွေ့, အခိုးအငွေ့သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ဓာတ်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ: အမြဲတမ်းရေတွင်းတစ်တွင်းလေဝင်လေထွက်အာကာသထဲမှာကိုအသုံးပြုပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ်ရှူရှိုက်မိပါဆိုးရွားသောကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများရှိသည်ဖို့သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ အမြဲအဖြစ်, ကောင်းသောစက်မှုဇုန်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလေ့ကျင့်ဖို့ကြိုးစားကြသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, မတော်တဆမျို၏ကိစ္စတွင်: ရေနှင့်ပါးစပ်ဆေးနှင့်ဆေးသမားကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး။ ရှူရှိုက်မိ၏အမှု၌: လတ်ဆတ်သောလေဘေးဒဏ်သင့်သူတစ်ဦး (s) ကိုရွှေ့ကြပြီးအသက်ရှုမထားဘူးဆိုရင်, အတုအသက်ရှူစီမံခန့်ခွဲနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Practitioner တိုင်ပင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ မတော်တဆအသားအရေအဆက်အသွယ်ဆယ်ငါးမိနစ်နိမ့်ဆုံးအဘို့ဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်သေချာစွာဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့လျှော်မည်သည့်ညစ်ညမ်းအဝတ်အစားသို့မဟုတ်ဖိနပ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ 2- chloro-5- methylpyrimidine အရေပြားကိုမီးရှို့သို့မဟုတ် sensitivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဆေးပညာ Practitioner ဆက်သွယ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
2- chloro-5- methyl pyrimidine အထူးစွန့်ပစ်အဖြစ်ပယ်စွန့်ပစ်ရပါမည်။ ဒီအထူးအစီအစဉ်များအမျိုးသားရေးနှင့်ဒေသတွင်းနှစ်ဦးစလုံးဥပဒေပြဌာန်းနှင့်အတူလိုက်နာမှုသေချာစေရန်သင်၏ဒေသခံစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းအခွင့်အာဏာနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရုံးအတွက်လိုင်စင်ရစွန့်ပစ်ခြင်းကုမ္ပဏီသုံးပြီးအရပျ၌ခံရမည်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆိုလို။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းရေနုတ်မြောင်းသို့ဖြန့်ချိမဖြစ်သင့်နှင့်သဲယိုဖိတ်မှု၏အမှု၌, အလုံပိတ်ကွန်တိန်နာသို့ vermiculite နှင့်သင့်လျော်စွာဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
2-Chloro- ၏ရလဒ်အဖြစ်မီးလောင်မှုငြိမ်းအေးစေရန်5-methylpyrimidine (22536-61-4) လောင်ကျွမ်းခြင်းတဦးတည်းခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုမီးသတ်ဘူး, ကာဗွန် (IV) အောက်ဆိုဒ်, ပေါ်လီမာရေမြှုပ်သို့မဟုတ်အရက်ကိုခံနိုင်ရည်ငြိမ်းအေးကိုသုံးနိုင်သည်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တဦးတည်းအပူလောင်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အကာအကွယ်မီးတိုက်ပွဲပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အသက်ရှူယန္တရားဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ထိတွေ့မှုကန့်သတ်တန်ဖိုးများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, 2- chloro-5- methylpyramid အရပ်ဌာန၌ထားခြင်းမရှိထိုကဲ့သို့သောန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအင်ဂျင်နီယာများများအတွက်ဓာတုအငွေ့တစုံတရာပေးအဖြစ်အထွေထွေကြိုတင်ကာကွယ်မှုကိုင်တွယ်စဉ်ကအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော Previous post: အဲလက်စ် Rodriges
နောက်တစ်ခု Next post: သငျသညျ spiro ဒြပ်ပေါင်းများအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါအားလုံး